Nezvedu - Arex Industrial Technology Co., Ltd.
Zvikamu Arex Industrial Technology Co., Ltd.
Arex Industrial Technology kambani yakawanikwa muna 1995, iyo seinotungamira yakazvimiririra Yekutengesa Yekutengesa. Sezvo isu takabatana nemafemu kuyambuka China kuendesa yakakwira-inoita hukama hwevatengesi. Izvo zvakatanga sebhizimusi diki rekugadzira michina ine chiono chekubatsira vamwe kubudirira uye shungu yekutsigira maindasitiri, yakakura neboka rakazvipira kuwedzera uye kushanda munzira nyowani, dziri nani uye dzakasiyana. Kunyanya, Arex inomiririra Baytain rubber nekambani yepurasitiki iri kuita bhizinesi repasi rese uye sezvo iri rakasarudzika hwindo rakanangana nekushambadzira kwepasirese. Baytain semugadziri wechizvarwa chemarabhabha uye zvigadzirwa zvepurasitiki muChina makore angangoita makumi matatu, ayo akasarudzika ekugovera zvipfeko zvinodzivirira zvemigodhi. Makambani maviri aya ndeebhodhi rimwe revatungamiriri. Zvese zviwanikwa zvakagovaniswa nemumwe. (Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Baytain: www.baytain.com)
Arex inogadzira, mutengesi, mhizha, machinist, mutengesi uye muparidzi wezvigadzirwa zvemabhizimusi, zvishandiso uye zvimwe zvinodiwa mumaindasitiri uye zvinodiwa. Isu tine mukana wekudyidzana kwakanaka nevamwe vanogadzira premium avo vanoshanda nenzvimbo dzakasiyana dzebhizinesi muChina kwenguva yakareba. Izvo zvave zvichiratidzwa kuti zvinopa kwete chete izvo zvataurwa pamusoro asi zvinogona kubatsira zvimwe zvinodiwa zvine chekuita nekuchera uye mechnical bhizinesi. Isu tine nzwisiso yakadzama yevatengi vedu nemaindasitiri zvinodiwa nezvinetso. Isu tinogara tichifunga kumberi nekugadzirisa zvinetswa uye kubvisa matambudziko uye chinangwa chekusasiya vatengi vedu vasina chokwadi. Kubatanidza maindasitiri nyanzvi neepasirose-inotungamira mhando, isu tinowana uye tinopa yakazara yakazara irabha, epurasitiki uye simbi zvigadzirwa nechinangwa cheindasitiri uye yekuchera mhinduro. Kuburikidza neyedu yehunyanzvi yekushandisa kuraira uye izere hesheni manejimendi mhinduro isu takawana kuvimba uye kutsigirwa kwemazhinji epasirese mabhizinesi ekambani yemigodhi uye inoenderana indasitiri.
Kuchinjana uye Kubatana
Arex inogadzira kudyidzana kwehupenyu hwakareba nekudyara nguva mukugadzira uye nekupa mhinduro dzakasarudzika kuti dzienderane nezvinodiwa zvebhizinesi rega. Kushanda pamwe chete nevatengi vedu kuvaka nharaunda dzinobudirira, dzine hutano uye dzakasimba.
Isu hatizvitarise semumwe mutengesi nekuti izvo hazvisi izvo zvatinomiririra; isu tiri vashandi vebhizinesi, takazvipira kuvandudza rwendo. Hushamwari hwakagadzirwa, uye hukama hwakavakwa - Shanda pamwe chete, kuhwina pamwe uye kupembera pamwe chete.
Mukuita kwekuvandudza, Arex yakachinjana uye ikabatana pamwe nemadhipatimendi mazhinji epasi rose nemasangano ekutsvagisa. Izvo zvakatibatsira isu kugadzirisa dhizaini yedu, kugadzira, kugadzirisa, kutumira uye kugadziridza kweinjiniya kugona. Kukurudzira Arex kukambani yepasi-yegiredhi yepasi yezvigadzirwa zverabha uye zvigadzirwa zve polyurethane, zvinoenderana nemhando dzese dziripo dzemuchina wekugadzirira munzvimbo yemigodhi.
Arex indasitiri yakanangana nekuwana kugona mukugadzira, kugadzira uye kupa kwekupfeka kusingagadzike uye ngura isingagadzirike mhinduro, zvikamu uye zvine hukama nemidziyo yekugadzirira mugodhi. Isu tinopa yakasarudzika yerabha mhinduro uye polyurethane mhinduro kune yakaoma migodhi uye maindasitiri mafomu anoda nzira yekuvandudza. Isu tine chivimbo chekuti zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro uye yemakwikwi mutengo zvichave zvakanaka kukanganisa vatengi vedu. Chinangwa chedu ndechekuve wako akanakisa mugadziri wezvemigodhi nemaindasitiri ekushandisa mhinduro.
Chiono chaArex ndechekuti chivimbo chakavimbwa, chakasarudzika mutsika dzerabha mhinduro uye polyurethane mhinduro munzvimbo yemigodhi yakaoma uye indasitiri munyika.
Ngatibvisei kushushikana uye kunetsekana kwekupedza stock. Maitiro edu matsva anoita kugadzirisa zvakare uye nekuchengetedza matoko ari nyore.
Gara wakabatana nekujeka kwakazara, isu tinofarira kuti kutaurirana kwakasimba kunoita kuti hukama hubudirire.
Isu tinoziva vatengi vedu vanoda mhinduro nekukurumidza, isu tinogwinya uye tinoshingairira pakupindura kwedu.
Nei uchiganhurirwa? Isu tinoisa nguva mukutsvaga chaizvo zvaunoda.
Ngatibatsirei imi! Isu tinozvirumbidza nekuve nenyanzvi dzeindasitiri paruoko kuti tiwane mhinduro kwayo nguva dzese.